Ku saabsan boggan intarnat-ka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Informationsverige.se - Ku hagaha bulshada Iswiidhan / Ku saabsan boggan intarnat-ka
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan boggan Informationsverige.se.
In la helo boggan intarnat-ka
Dhinaca Informationsverige.se waxaa laga helayaa kadino ku haboon kooxda ay ku jiheysanyihiin ama dhinaca xiisaha. Halkan waxaad ka helaysaa kadinka warbixinta loogu talogalay:
adigaaga codsaday ama codsan doona magan-gelyo
adigaaga dhawaan helay sharciga deganaansho
adigaaga ka yar 18 sano ee yimi Iswiidhan iyadoo waalidkaa aanay kula socon
Waxaa kale oo jira kadin leh warbixino ku saabsan sida Iswiidhan u shaqayso, looguna talogalay adigaaga doonaya inaad dheeraad ka ogaato Iswiidhan.
Gal kadinka sida ugu fiican kuugu haboon adiga:
Anigu waxaan ahay magan-gelyo doon – akhri waxyaabo ay ka mid yihiin qawaaniinta iyo xuquuqda khuseeya xilliga wakhtiga magan-gelyo doonka. Anigu waxaan helay sharciga deganaansho – akhri waxyaabo ay ka mid yihiin waxa aad u baahantahay inaad ogaato marka aad dhawaan heshay sharciga deganaansho. Anigu waxaan imi iyadoo waalidkay aanay ila socon – akhri waxyaabo ay ka mid yihiin nooca caawimaada aad heli karto. Barashada bulshada – Ku saabsan Iswiidhan
Si loo helo aragti guud dhinaca nooca warbixinaha ku jira boggan intarnat-ka waxaad dhag ka siin kartaa kadinada kala duwan oo wixi dheeraad ah ka akhrin kartaa halkaas. Qawaaniintu way kala duwanaan karaan haddii aad tahay magan-gelyo doon ama haddii aad heshay sharciga deganaansho.
Kadinadan badanaaba waxaad ka helaysaa cinwaano isku eeg. Tusaale ahaan ku saabsan shaqo, guri, daryeelka iyo dhaqaalaha. Haddii aad doonaysid inaad wax dheeraad ah ka ogaato sida Iswiidhan u shaqayso ee dhinaca mid ka mid ah arrimahan waxaad marka hore dhag ka siinaysaa kadinka aad u aragto inuu kugu haboonyahay ka dibna cinwaanka aad xiisaynayso.
Boggan intarnat-ka waxaa kale oo aad ka helaysaa boggag aad ka bilaabi karto tababarka iswiidhishka, boggag aad waxyaabo dheeraad ah ka ogaan karto haddii aad tahay waalid jooga Iswiidhan iyo boggag ku saabsan koorsada Maadooyinka cilmiga bulshada iyo alaabta koorsada "Om Sverige".
Baro iswiidhish In waalid la ahaado Barashada bulshada – Ku saabsan Iswiidhan
In wax laga raadiyo boggan intarnat-ka
Halka ugu saraysa ee boggan intarnat-ka waxaa laga helayaa sawirka quraarada weynaysada. Haddii aad dhag ka siiso quraaradan weynaysada waxaad ku qori kartaa kalmada aad raadinayso ee luqada aad dooratay. Tani waxay keeni kartaa inaad si sahlan u hesho warbixinta aad raadinayso.
Luqada iyo turjumida
Markii ugu horeysay ee aad gashay Informationsverige.se waxaad dooratay luqada boggan intarnat-ka lagu arkayo. Dhinaca Informationsverige.se waxaanu ku turjumnay boggaga oo dhan sagaal luqadood. Adigu waxaad kala dooran kartaa:
Haddii mar dambe aad doonaysid inaad doorato luqad kale oo aan ahayn tii aad markii hore dooratay waa inaad dhag ka siisaa sawirka kubada aduunka ee yar ee xagga ugu sareysa. Ka dib dooro luqada aad doonaysid.
Macluumaadka ku saabsan gobolada iyo degmooyinka Iswiidhan ilaa hadda waxaa lagu helayaa carabi, ingiriisi, soomaali, iswiidhish iyo tigrinya.
Haddii boggan aan lagu helayn luqada aad dooratay ee halkan Informationsverige.se markaasi waxaa boggan lagu arkayaa Iswiidhish.
Xiriiryada boggag kale iyo boggag intarnat-ka ah
Adigu waxaad dhag ka siin kartaa xiriiryada aad xiisaynayso. Xiriiryadan waxay furi karaan boggag kale dhinaca Informationsverige.se kuwaas oo aad ka heli karto warbixino dheeraad ah. Waxaa kale oo laga heli karaa xiriiryada bog intarnat-yo kale, tusaale ahaan Hey'adda Socdaalka ama Hagida daryeelka caafimaadka ee 1177.
Haddii xiriirkan leeyahay sawirkan waxaad tagaysaa bog ku yaala Informationsverige.se. Sawirkan wuxuu leeyahay midabo kala duwan taas oo ku xiran halkan bogga muhiimka ahi ka tirsanyahay.
Sawir dibeda ah
Haddii xiriirkan leeyahay sawirkan waxaad tagaysaa bog ku yaala bog kale oo intarnat-ka ah.